Ibhizinisi, Ibhizinisi lamazwe ngamazwe
Ngenxa yokuthi izimboni ezifana ne-metallurgy, ubunjiniyela bamakhemikhali, izingubo zokugqoka kanye nemikhiqizo yokudla zakhiwa kakhulu eNovosibirsk, idolobha linenzuzo enkulu kakhulu, okwandisa kakhulu isidingo sokuhamba ngokuhamba kwempahla ngesilinganiso esikhulu. Idolobha yiyona inhlanganisela enkulu kunazo zonke zesitimela, ngakho-ke kungenzeka ukuthumela izimpahla kuzo zonke izinkomba.
Ngokungafani nokuhamba ngezimoto kanye nokuhamba emoyeni, ukusebenza komgwaqo kuphethwe yizimo zezulu, kanti izinsizakalo zezitimela zendleko eziphansi. Ngokuhlanganiswa nokusebenza kahle nokuthembeka, lolu hlobo lokuthutha luba lula nakakhulu kumakhasimende. Ukuthunyelwa kwezimpahla kwenzeka ngokulandela uhlelo oluhlelwe kahle, imizila enhle ibalwa, imithwalo yempahla ihlanganiswe ngokuvumelana nayo yonke imithetho, ukulayisha nokulayishwa kwemisebenzi kwenziwa ngenengozi encane yezimpahla.
Ngokuvamile, ukuhamba kwezitimela kuya eNovosibirsk kukhethwe ukulethwa kwezimpahla ezinamandla , ngoba nje akwazi ukuthuthwa ezinye izindlela zokuthutha . Ngakho-ke, kungenzeka ukuthutha imithwalo yempahla ngokugcwele noma ingxenye.
Ngokuvamile, izinhlangano eziningi zinesidingo sokuthutha imithwalo encane, kuyilapho ukuyala ukuthutha okuhlukile kokuthutha akuyona ingqondo, ngoba ukuhamba kuyoba imali enkulu kakhulu. Kulesi simo, kuyoba inzuzo kakhulu ukusebenzisa uhlelo lokuthumela impahla ehlanganisiwe. Ukuthunyelwa kwezimpahla zeqembu - kuyoba lula ukuthutha imithwalo yakho ngezindleko ezincane emigwaqweni wesitimela. Uzohanjiswa ngokushesha lapho uya khona.
Ukuthuthwa kwezimpahla ezingcolile kwenziwa ezinqoleni ezingenhla noma ezinqola ezinezinsimbi ezikhethekile, zonke izimo zokuthutha ezidingekayo ziyabonakala: impahla enkulu ivikelwe emvula nasemanzini, ngesikhathi sokuhamba ngeke kushaywe umoya.
Imithwalo yamanzi ihanjiswa ngamathangi noma ama-flexitanks, kulesi sitsha umkhiqizo awuyikuchithwa, izinto ezingaphandle ngeke zifake. Impahla engapheli ilula ukuthutha eziqandisini. Imikhiqizo yokudla efana nezinhlanzi, inyama, imifino, izithelo, noma imikhiqizo yamakhemikhali, uma ibona izinga lokushisa nokuqina, kuyosinda ekuthuthekeni kulesisitsha.
Futhi, esitsheni noma esiteshini ngesitimela, ungathumela imoto, noma yonke imoto yezimoto.
Ukuthuthwa kwezimpahla ngesitimela kulula, kuyasebenza futhi kunomnotho, ngakho-ke eNovosibirsk lolu hlobo lokuthutha luzohlala ludingekile kakhulu ngenxa yokuthi iNovosibirsk ingenye yemizi emikhulu eRussia, kodwa ngenxa yokuthi indawo, ukuhamba ngesitimela eya eNovosibirsk kuyindlela enhle kakhulu Territorially.
Kuzokwenzekani e-Ukraine lapho kwakhiwa i-Nord Stream-2?
Military Space Forces of Russia: incazelo isakhiwo kanye nokusungulwa
Black Amagilebhisi: ikhalori okuqukethwe amaprotheni, fat, carbohydrate,
Umuthi 'Aziks-Derm ": ukubuyekezwa kanye yokusetshenziswa
Ingubo Lilac phansi ubukeka nenhle kakhulu
Okumbi polyurethane foam njengoba ukwahlukanisa
Siyakhumbula izifundo ebuntwaneni: anti-ukucindezeleka amathoyizi